किन छाडे सलमानले धुम ४ ? यस्तो छ कारण - pnpkhabar.com
You are at:Home»हलिवुड/बलिवुड»किन छाडे सलमानले धुम ४ ? यस्तो छ कारण
किन छाडे सलमानले धुम ४ ? यस्तो छ कारण
By रिता घिसिंग on २६ भाद्र २०७५, मंगलवार ०६:०५ हलिवुड/बलिवुड
एजेन्सी : भारतिय मिडियाका अनुसार बलिउडका चर्चित कलाकार सलमान खानले फिल्म धुम ४’मा नखेल्ने भएका छन् । मिडियाका अनुसार उक्त फिल्ममा सलमान खानकी पूर्व प्रेमिका एश्वर्य रायका पति अभिषेक बचन पनि खेल्ने भएकाले फिल्म छाडेको बताइएको छ । सलमान र अभिषेक बिच लामो समय दखी त्यति राम्रो सम्बन्ध भने नभएको तर यता सलमानले भने धुम ४ नखेल्नुको कारण भने अरु नै बताएका छन् ।
सलमानले यस फिल्ममा काम गर्न राजी भएमा यस फिल्ममा उनले चोरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ ।सलमानले आफ्ना फ्यानहरुले आँखा बन्द गरेर आफूलाई फलो गर्ने भएका कारण आफूले कहिले पनि नकारात्मक भूमिका निर्वाह नगर्ने नियम बनाएको र यही नियम पालना गर्ने क्रममा नकारात्मक भूमिका रहेका फिल्महरुको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने गरेको बताएका छन । सलमान खानले आफुले सलमान खानले फिल्म धुम ४’ को नाम नलिइ फिल्म नखेल्नुको कारणबारे भने बताएका छन् ।